प्रवृतिमा सधैं Updo!
लामो कपाल महिलाहरु सधैं फैशनेबल हेर्न। तर, कहिलेकाहीं आफ्नो धन कपाल को एक शानदार टाउको को मालिक समस्या धेरै ल्याउँछ। लामो र भारी कपाल कडा आफ्नै updo मा जम्मा गर्न पर्याप्त। तर पनि, छैन यो लायक छ, किनभने यो आफ्नो प्रिय लामो बलिदान गर्न।
लामो कपाल धेरै छ स्त्री: यो आफ्नो केटी भंग गर्न आवश्यक छ, र त्यो, एक चुम्बक जस्तै तुरुन्तै अरूको विचार आकर्षित गर्छ। पक्कै, यो ध्यान एकदमै रमाइलो छ, तर कपाल बगिरहेको - यो सधैं व्यावहारिक र सुविधाजनक छ। आज, को लागि असंख्य विकल्पहरू छन् लामो कपाल शैली, तर उच्च Hairstyles सर्वाधिक लोकप्रिय छन्।
आफ्नो कल्पना तलको निर्देशन प्रयोग गरेर र व्यक्त हरेक महिला आफ्नै कला काम आफ्नो कपाल सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ। उच्च बनाउन क्रममा लामो कपाल लागि Hairstyles, जरूरी सैलून लागू हुँदैन।
केश "धेरै शिष्ट"
बाल व्यवस्थित बनाउन मद्दत एक उपकरण - यो केश को कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्नु अघि, तपाईं धुन र आफ्नो बाल भोकमरी र त्यसपछि गर्न सीरम चौरसाई तिनीहरूलाई लागू गर्न आवश्यक छ। अर्को, तिनीहरूले मा भेला एक ponytail, तर आफ्नो दोब्र्याइएको अन्तिम खण्ड छैन पूर्ण आवश्यक गर्छ - यो समाप्त शीर्षमा रहन छ। अर्को चरण - को पुच्छर मा बाल को ठाडो विभाजन। बाल सबै सफासँग र्याप पाश - बाँकी जानेबेलामा सुझाव र्याप परिणाम आवश्यकता, र तिनीहरूलाई पछि। परिणामस्वरूप संरचना पिन द्वारा निश्चित र समाधान छ hairspray।
बाल बाहिर धनुष
अब, खैर, प्रवृत्ति यो केश - तपाईं नै समय मा एक मूल र रोमान्टिक आफ्नो छवि बनाउन चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो तपाईं कपाल बाहिर bow मदत गर्नेछ। धनु कपाल बाहिर सजाउनु गर्न थप सामान आवश्यक छैन, टी। गर्न। उहाँले नै धेरै स्टाइलिश देखिन्छ महिला updo रुचि त, यो विकल्प पूर्ण फिट छ।
पहिलो चरण मा बाल तेर्सो दुई भागमा विभाजित। भविष्यमा को धनुष को उचाइ स्थान र जानेबेलामा को स्तर निर्भर हुनेछ। जब सम्म यो आवश्यक छैन - तल्लो भाग एक ponytail मा fastened छ। आधार शीर्ष मा एक धनुष छ। यो एक सानो कोर्नु हुन र एक रबर ब्याण्ड बाँध आवश्यक छ। एक पाश फारम कपाल को लम्बाइ को 2/3 मार्फत उत्तरार्द्ध कारोबार गम खण्डका गरिरहेको। हामी ठाडो दुई बराबर टुक्रा, र बाँकी सुझावहरू मा एक पाश साझेदारी
तिनीहरूलाई बीच सुत्छन्। यसरी, यो bow तयार देखिन्छ। यो एक वार्निश द्वारा सुरक्षित हुनुपर्छ। केश तल्लो भाग गम मुक्त र यो एउटा इच्छित आकार दिनकै छ, छ। ई धोखा वा, त्यसको विपरीत, utjuzhkom align। र तपाईं यसलाई बाहिर अर्को धनुष लिन सक्छ।
आदर्श उच्च रूपमा PROM लागि Hairstyles रात। तिनीहरूले पनि विवाह र अन्य उत्सव अवसरका लागि गर्न सकिन्छ।
सबै updo मात्र एक निश्चित कौशल, तर पनि कल्पना चाहिन्छ। माथिको उदाहरण आधारभूत बाल, टी। K. एक महिला सजिलै थप्न वा एक विशेष वस्तु हटाउन सक्नुहुन्छ उल्लेख गर्न सकिन्छ। परीक्षण गर्न नडराऊ, र तपाईं सधैं irresistible हुनेछ!
मध्यम कपाल मा फेसनदार सैलुन क्यासकेड
महिला रूपमा सौंदर्य सैलून मा धोखा?
कसरी discolor कपाल मा घर?
मेंहदी बाल: उपचार र चित्रकला को समीक्षा
सबै भन्दा राम्रो कपाल फलाम। समीक्षा, मूल्यहरू, फोटो
परिरक्षण बाल - पुनर्जनन एक नयाँ दृष्टिकोण
कसरी प्रेम पाउन, वास्तविक?
अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली
Nokia C2-05: समीक्षा, समीक्षा, विनिर्देशों
आफ्नो बच्चाहरु midges द्वारा bitten? म सुनिंनु र उपचार राहत गर्न के गर्नुपर्छ?
छिटो फैंसी र उत्सव: कछुवा केक Recipe
शब्द "सत्य" गर्न उपयुक्त राइम
पक्षलाई - आवाज छ?
तेल छाला लागि कस्मेटिक्स पुरुष र महिला दुवै आवश्यक!